Bit By Bit - dhaqanka loo kuurgalo - 2.4.3.2 aaddinta
Aaddinta abuuro barbardhigo cadaalad ah iska gooyaa kiisaska.
isbarbardhiga Fair ka iman kartaa mid tijaabo nasiibin gacanta ama tijaabo dabiiciga ah. Laakiin, waxaa jira xaalado badan halkaas oo ma aad ordi karaan tijaabo ku haboon iyo nooca aan bixiyo tijaabo dabiiciga ah. In goobaha kuwan, sida ugu wanaagsan ee ay u abuuraan is barbardhig caddaalad ah waxaa tallaabadaas. In ku habboon, cilmi eegayaa xogta aan tijaabo si ay u abuuraan lammaane oo dadka ku jira la mid ah marka laga reebo mid ka mid ah uu helay daaweyn iyo mid ka mid ma leeyahay. In geeddi-socodka ah ee ku habboon, cilmi dhab sidoo kale gooyaa, in uu yahay, qubaan kiisaska ma jiraan marka la barbardhigo cad. Sidaas darteed, habkan la si sax ah loo yaqaan lahaa u dhigma-iyo-manjooyin, laakiin waa aniga iyo muddada dhaqanka soo shirtagi doonaa: dhigma.
Tusaale A quruxda badan ee xoogga tallaabadaas xeeladaha la ilaha xogta weyn non-tijaabo ka cilmi ku saabsan hab dhaqanka macaamiisha by Liran Einav iyo asxaabtii iman (2015) . Einav iyo asxaabtii ahaayeen xiiso Xaraashyada qaadan meel on Arbacada ah, iyo in ku tilmaamay shaqadooda, waxaan diiradda doonaa mid arrin gaar ah, saamaynta xaraashka qiimaha laga bilaabo on natiijada xaraashka, sida qiimaha iibka ama itimaalka ee sale a.
Habka ugu arinku inuu ka jawaabo su'aasha ku saabsan saamaynta qiimaha laga bilaabo on qiimaha iibka u noqon lahayd in si fudud loo xisaabiyo qiimaha ugu dambeeya ee Xaraashyada qiimaha upka kala duwan. Habkani wuxu noqon lahaa wanaagsan haddii aad si fudud u doonayaan in la saadaaliyo qiimaha sale of item ah siiyey in la saaray on Arbacada ah la qiimo-upka siiyey. Laakiin, haddii aad su'aal waa waxa saamaynta bilaabo qiimaha on natiijada suuqa habkan ma shaqeeyaan, sababtoo ah ma wuxuu ku salaysan yahay barbardhigo cadaalad ah; Xaraashyada la qiimaha laga bilaabo hoose waxaa laga yaabaa in arrin ka duwan Xaraashyada qiimaha sare upka (tusaale ahaan, waxay noqon karaan noocyada kala duwan ee badeecadaha ama ka mid ah noocyada kala duwan ee gada).
Haddii aad tahay mar hore ka walaacsan samaynta barbardhigo cadaalad ah, laga yaabo in aad ka boodo hab gaab oo ka fiirso socda tijaabo beer meesha aad iibiso lahaa gaar ah item-odhan, kooxda-leh golf set go'an xaraashka xuduudaheedu-odhan, maraakiibta free, xaraashka furan muddo laba toddobaad ah, iwm-laakiin la kala sooc lahayn loo dhigay qiimaha uu ka bilaabanayo. By is barbar natiijada suuqa keentay, tijaabo arimahan lahayd cabbirka aad u cad ee saamaynta bilaabo qiimaha on qiimaha sale. Laakiin, cabiraada this codsan lahaa oo kaliya in ay hal wax soo saarka gaar ah oo dhigay argument xaraashka. Natiijada ayaa waxaa laga yaabaa kala duwan, tusaale ahaan, noocyada kala duwan ee wax soo saarka. Aan aragtida xoog, way adag tahay in saadaalin hal tijaabo this kala duwan ee ka buuxa tijaabo suurto gal ah in lagu soo ordi kari lahaa. Dheeraad ah, tijaabo beerta waa ku filan qaali ah in waxa uu noqon lahaa infeasible in uu ordo ku filan oo ka mid ah ilaa si ay u dedaan meesha bannaan ee dhimaya oo dhan wax soo saarka iyo noocyada xaraashka.
Marka la barbardhigo hab arinku iyo hab tijaabo ah, Einav iyo asxaabtii ay qaataan hab saddexaad: dhigma. trick ugu weyn ee ay istaraatijiyad waa in la ogaado wax la mid ah tijaabo dhulkaas horay u dhacay on Arbacada ah. Tusaale ahaan, Jaantuska 2.6 muujinaysaa qaar ka mid ah 31 liiska saxda ah kooxda-a ee golf isku Taylormade gubi 09 Driver-la iibin by isku seller- "budgetgolfer" ah. Si kastaba ha ahaatee, liiska waxay leeyihiin astaamo ka yara duwan. Kow iyo toban iyaga ka mid ah waxay bixiyaan darawalka qiimo go'an oo ah $ 124,99, halka 20 kale waa Xaraashyada la taariikhaha dhammaadka kala duwan. Sidoo kale, liiska ku leeyihiin lacagaha kala duwan ee maraakiibta, sidoo kale $ 7.99 ama $ 9.99. In si kale loo dhigo, waa sida haddii "budgetgolfer" waxaa socda tijaabo cilmibaadhayaal ah.
The liiska of Taylormade gubi 09 Driver la iibin by "budgetgolfer" waa hal tusaale oo u qabtay kulan ee liiska, halkaas oo item saxda ah isku loo iibin by iibiyaha saxda ah isla laakiin mar kasta oo leh sifooyin ka yara duwan. ku Guda weyn ee Arbacada ah gudahood waxaa macno yihiin boqolaal kun oo nooc kulan ku lug malaayiin liiska. Sidaas darteed, halkii ay ka barbar qiimaha kama dambaysta ah ee dhammaan Xaraashyada gudahood qiimo upka siiyey, Einav iyo asxaabtii dhigi barbardhigo nooc kulan gudahood. Si isku natiijada ka barbardhigo ah, kuwaas oo boqollaal kun oo nooc kulan gudahood, Einav iyo asxaabtii dib-u-muujiyaan qiimaha upka iyo qiimaha final marka la eego qiimaha tixraaca ee shay kasta (tusaale ahaan, ay celcelis ahaan qiimaha sale) ah. Tusaale ahaan, haddii Taylormade gubi 09 Darawalka ayaa qiimaha tixraaca ee $ 100 (oo ku salaysan iibka ay), ka dibna qiimaha laga bilaabo $ 10 ah lagu sheegi lahaa sida 0.1 iyo qiimaha kama dambaysta ah ee $ 120 lagu sheegi lahaa sida 1.2.
Jaantuska 2.6: Tusaale ka mid ah set oo ah kulan. Tani waa kooxda saxda ah isla golf (a Taylormade gubi 09 Driver) lagu iibin by qofka saxda ah isku mid ah ( "budgetgolfer"), laakiin qaar ka mid ah iibka, kuwaas oo la sameeyey xaalado kala duwan (tusaale ahaan, qiimaha laga bilaabo kala duwan). Jaantuska soo qaatay Einav et al. (2015) .
Xusuustaa Einav iyo asxaabtii ahaayeen xiiso saamaynta qiimaha bilowga on natiijada xaraashka. First, iyadoo la isticmaalayo dhaca toosan ay qiyaasay in qiimaha laga bilaabo sare hoos u itimaalka ee sale a, iyo in qiimaha laga bilaabo sare kordhiyo qiimaha sale final, shuruud on sale a dhaca. isu By, kuwaas oo qiyaas-kuwaas oo celcelis ahaan in ka badan waxyaabaha oo dhan iyo u qaadan xiriir toosan u dhexeeya qiimaha upka iyo final ma natiijooyinka-jira oo dhan u xiiso badan. Laakiin, Einav iyo asxaabtii kaloo isticmaali baaxadda weyn ee xogta si ay u qiyaasto noocyo kala duwan oo la ogaaday khiyaano. First, Einav iyo asxaabtii sameeyey qiyaasta, kuwaas oo si gooni gooni ah waxyaabaha qiimaha kala duwan oo aan la isticmaalayo dhaca toosan. Waxay heleen in halka xiriirka ka dhexeeya qiimaha bilowga iyo ixtimaalka ee sale waa toosan, xidhiidhka ka dhexeeya qiimaha upka iyo qiimaha sale si cad u yahay non-toosan (Jaantuska 2.7). Gaar ahaan, maxaa yeelay, laga bilaabo qiimaha u dhexeeya 0.05 iyo 0,85, qiimaha upka uu leeyahay saameyn aad u yar oo ku saabsan qiimaha iibka, lagu helo in loo ebyey seegay falanqaynta wixii la wareegay xiriir toosan.
Jaantuska 2.7: Xiriirka u dhexeeya qiimaha xaraashka bilowga iyo ixtimaalka ee sale a (guddi ka tagay) iyo qiimaha iibinta (guddi midig). qiyaastii Waxaa jira xiriir toosan u dhexeeya qiimaha bilowga iyo ixtimaalka ee sale, laakiin waxaa jira xiriir aan toosan u dhexeeya qiimaha bilowga iyo qiimaha iibka; waayo, laga bilaabo qiimaha u dhexeeya 0.05 iyo 0,85, qiimaha upka uu leeyahay saameyn aad u yar oo ku saabsan qiimaha sale. In labada kiisaska, cilaaqaadka ay yihiin asal ahaan madax-bannaan ee qiimaha item. Garaafyada Kuwani saari 4a berdihii iyo 4b Einav et al. (2015) .
Second, halkii celcelis ahaan in ka badan waxyaabaha oo dhan, Einav iyo asxaabtii kaloo isticmaali baaxadda weyn ee xogta si ay u qiyaasto saamaynta qiimaha laga bilaabo 23 qaybaha kala duwan ee alaabta (tusaale ahaan, sahayda xayawaanka, korantada, iyo xusuusan sports) (Jaantuska 2.8). Qiyaasta waxay muujinayaan in ka badan kala items-sida qiimaha lagu xusuusan-bilowga leedahay saamayn yar oo ku saabsan siday suuragal u ah ee iib ah iyo saamayn weyn on qiimaha final sale. Dheeraad ah, waxyaabaha sida-dheeraad ah commodified sida DVD-yada iyo video-qiimaha bilowga ayaa inta badan saamayn lahayn on qiimaha kama dambaysta ah. In si kale loo dhigo, in celcelis ahaan isku daraa natiijooyinka 23 qaybaha kala duwan ee waxyaabaha dhuuntaa macluumaad muhiim ah oo ku saabsan farqiga u dhexeeya waxyaabahaan.
Jaantuska 2.8: Natiijooyinka tusay qiyaasaha ka category kasta oo gaar ah; dhibic ku adag in qiyaasta ee dhammaan qaybaha gobalda (Einav et al. 2015, Table 11) . Qiyaasta waxay muujinayaan in ka badan kala items-sida lagu xusuusan-qiimaha bilowga leedahay saamayn yar oo ku saabsan siday suuragal u ah ee sale a (x-dhidibka) iyo saamayn weyn on qiimaha final sale (y-dhidibka).
aad Xitaa haddii aan si gaar ah xiiso Xaraashyada on Arbacada ah, aad leedahay si aad u bogi jidkii uu Jaantuska 2.7 iyo 2.8 Jaantuska dalab faham doonee, ee Arbacada ka badan qiyaasaha dhaca toosan fudud in u qaadan xiriir toosan iyo isu geeyo qaybaha kala duwan ee alaabta. Kuwani qiyaasta ugu khiyaano lagu muujiyo xoogga ku habboon in xogta weyn; Qiyaasta kuwaas oo ay noqon lahaayeen kuwa aan macquul aheyn oo aan la tirin wayn ee tijaabo beerta, taas oo ay noqon lahaayeen kuwa qaali.
Dabcan, waa in aan ku kalsoonahay yar in natiijada daraasaddan kasta oo ku habboon, gaar ahaan ka badan aan doonaynin in natiijada tijaabo u dhigma. Marka lagu qiimeeyo natiijada ka waxbarasho ku habboon kasta, waxaa jira labo walaac muhiim ah. First, waxaan leenahay in la xasuusto in aan hubiyo karaa oo kaliya barbardhigo cadaalad on waxyaalihii laga isticmaalo ku habboon. In natiijooyinka ay ugu muhiimsan, Einav iyo asxaabtii ma saxda ah tallaabadaas on afar sifooyinka: Lambarka iibiyaha ID, category item, horyaalka item, iyo cinwaan labaad. Haddii waxyaabaha ay ahaayeen kala duwan oo siyaabo aan la isticmaalo ku habboon, in la abuuro laga yaabaa in la barbardhigo aan caddaalad ahayn. Tusaale ahaan, haddii "budgetgolfer" hoos u qiimaha Taylormade gubi 09 Driver ee xilliga qaboobaha (markii kooxo golf ka yar caan ah), ka dibna waxa ay u muuqdaan laga yaabaa in qiimaha laga bilaabo hoose keeni hoos u dhaca qiimaha final, marka Dhab ahaantii tani waxay noqon lahaa artifact ah xilliyeed kala duwanaansho ku baahida. Guud ahaan, Habka ugu fiican ee dhibaatada u muuqata in ay isku dayayaan noocyo badan oo kala duwan oo ku habboon. Tusaale ahaan, Einav iyo asxaabtii celi ay falanqaynta halkaas nooc kulan ka mid ah waxyaabaha on sale hal sano gudahood, hal bil gudaheed, iyo contemporaneously. Samaynta suuqa kala waqtiga adag hoos tirada nooc kulan, laakiin waxa ay yaraynaysaa walaac ku saabsan kala duwanaanshaha xilliyeed. Nasiib wanaag, ay ugu helaan in natiijada waa iska beddelin by kuwan isbedel ku shuruudaha ku habboon. In suugaanta ku habboon, oo noocan ah ayaa walaac waxaa inta badan ka muujiyeen in la eego observables iyo unobservables, laakiin fikradda muhiimka ah waa runtii in cilmi waxa kaliya ee la abuurayo barbardhigo cadaalad on sifooyinka loo isticmaalay ku habboon.
The walaac labaad waaweyn xilliga turjumidda jawaabta ku habboon waa in ay kaliya ka codsan in ay xogta isku aadiyo, iyagu ma ay khuseeyaan kiisaska aan la isku aadiyo yaabaa. Tusaale ahaan, by xadidaysa ay cilmi baaris in waxyaabaha lahaa liiska badan Einav iyo asxaabtii waxaa diiradda saaraya alaab xirfadeed iyo semi-xirfadeed. Sidaas darteed, markii turjubaan barbardhigo kuwaas ayaynu waa inay xusuustaan ​​in ay khuseyso oo kaliya hoosaad ah ee Arbacada ah.
Aaddinta waa istaraatijiyad awood u helidda barbardhigo cadaalad ku adkayd badan. Si saynisyahano badan bulshada, u dhigma uu dareensan yahay sida ugu fiican labaad si tijaabo, laakiin waa in la aaminsan yahay in ay tahay in la baddalo, wax yar. Aaddinta in xogta weyn waxaa laga yaabaa in ka wanaagsan yahay tiro yar oo ah tijaabo beerta marka: 1) heterogeneity in saamaynta muhiim ah iyo 2) waxaa jira observables wanaagsan ee u dhigma. Shaxda 2.4 bixisaa qaar ka mid ah tusaalayaal kale oo sida habboon loo isticmaali karaa ilaha xogta weyn.
Shaxda 2.4: Tusaale waxbarashada in ay isticmaalaan ku habboon si aad u hesho barbardhigo cadaalad raad digital gudahood.
dhab ah diiradda
Ilo xog Big
Saamaynta of toogasho on rabshadaha booliska Jooji-iyo-Frisk diiwaanka Legewie (2016)
Saamaynta of September 11, 2001 on qoysaska iyo deriskooda diiwaanka codbixinta iyo diiwaanka deeq Hersh (2013)
sadhaysan Bulshada Isgaarsiinta iyo ansaxinta saarka xogta Aral, Muchnik, and Sundararajan (2009)
Gebogebadii, habab gaab in la qiyaasayo saamaynta sababaha ka xogta aan tijaabo yihiin khatar. Si kastaba ha ahaatee, xeelado qaadashada qiyaasta sababaha been weheliyaan taxanaha ah ka ugu adag in liita, iyo cilmi ogaan karaa isbarbardhiga cadaalad xogta aan tijaabo gudahood. Koritaanka ee had iyo jeer-on, nidaamka xogta weyn kordhisaa awoodda aan u leenahay in ku ool ah u isticmaali laba hab oo jira: tijaabo dabiiciga ah iyo ku habboon.